सिटौलाको ‘देश र परिवेश’ विमोचन
काठमाडौं-शिक्षाको क्षेत्रमा लामो समयदेखि संलग्न डा. सुरेन्द सिटौलाको ‘देश र परिवेश’ कविता–सङ्ग्रह विमोचन गरिएको छ । देश, समाज, इतिहास, राजनीति, शिक्षा, दर्शन जस्ता विभिन्न विषय र समकालीन नेपालको अवस्थालाई समेट्ने ५२ वटा कविताहरू यस सङ्ग्रहमा रहेका छन् ।
सङ्ग्रहमा समावेश भएका कविताहरूले नेपालको इतिहासदेखि वर्तमानसम्मका विभिन्न सवालहरूलाई समेटेका छन् । सबै कविताहरूको केन्द्रविन्दुमा देश र समाजको चित्र प्रस्तुत गरिएको छ । लामो समयसम्म विज्ञानको प्राध्यापन र शिक्षाको क्षेत्रमा लामो समयदेखि संलग्न डा. सिटौलाका फुटकर कविताहरू धेरै प्रकाशन भए पनि सङ्ग्रहका रूपमा यो पहिलो प्रकाशन हो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठनका कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीले सङ्ग्रहमा समावेश भएका कविताहरूले कवि डा. सिटौलाले आफ्नो पेशागत कार्यकालमा अनुभव गर्नुभएका देशका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक विकृतिहरूको चित्रण गरेको बताए । कवि डा. सिटौलाले सङ्ग्रहमा समाजमा देखिएका देश–कालमा भोगेका कुरालाई कवितामा उतारेको बताए । सङ्ग्रहका बारेमा साहित्यकार अशेष मल्ल, प्रा.डा. बद्रीविशाल भट्टराई र सञ्चारकर्मी रमेश खड्काले संक्षिप्त समीक्षा गरेका थिए ।
डा. सुरेन्द्र सिटौला पेशाले प्राध्यापक् हुन् । अमृत साईन्स क्याम्पसमा ३७ वर्ष लामो प्राध्यापन र झण्डै तीन दशक बागमती बोर्डिङ्ग स्कुलका सञ्चालकको रूपमा काम गरेका सिटौलाको साहित्यिक संलग्नता भने पुरानो हो ।